Olee otú ige ntị Spotify music on Spotify PC
Na-ege ntị Spotify music on PC bụ nnọọ akụkụ ọzọ Of Spotify nke na-enye ọtụtụ ihe na-enye ohere ọrụ inwe nnọọ na ngwaọrụ ọzọ ohere ha ntị mmasị music. Ihe na mkpa na-ege ntị Spotify Music na PC bụ ngwa na-arụnyere na kọmputa. Echeta mgbe niile na site na wụnye Spotify dị ka a standalone ngwa, ọrụ ga-nnọọ mma ọrụ ahụmahụ na ọdịyo àgwà tụnyere ka web-dabeere saịtị. N'ihi ya na-ege ntị music site Spotify on pc enye a ọhụrụ na ahụmahụ magburu onwe ka ọrụ.
Nkebi nke 1: Atụmatụ maka Spotify pc download
Nkebi nke 2: Olee otú ibudata Spotify music on PC
N'ihi nzube nke PC Download, mkpa ka i nwere ihe ndị a chọrọ iburu n'uche. Icheta mgbe nile na Spotify ewe otutu ohere nke diski ike gị maka nchekwa ma ọ bụ mma na-akpọ ka cache nzube. Gburugburu 5 GB nke diski ike ohere bụ na-iwesa maka otu. Fọrọ nke nta 50 GB nke diski ohere a chọrọ maka mma mmetụta nke gị kasị mmasị music ọrụ na PC gị. Ọbụna dị ka Spotify bụ ịdabere na ndị nwere oké mma ka na-eme ngwa nye arịrịọ gị, ngwa ka kwesịrị otutu cache hazie gị arịrịọ na quickest oge o kwere omume. The Computer dịkwa mkpa a ọma Ram ebe nchekwa ma ọ dịkarịa ala 2 GB nke Ram dị mkpa n'ihi na n'aka. The ukara nkọwa dị mkpa maka nzube nke Spotify nwere ike chịkọtara ka A PC na-agba ọsọ Windows XP, Vista, ma ọ bụ 7 na a brọdband njikọ Ịntanetị. Mgbe na Mac, na chọrọ nwere ike ikwu dị ka Mac OS X 10.4.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, a njikọ Ịntanetị dị ka windows ma ma a PowerPC G4 ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ a usoro na-agba ihe Intel processor.
Ka ibudata Spotify on PC, ị ibudata installer nke Spotify maka PC gị wee wụnye ya ozugbo.
Free Spotify PC na Spotify adịchaghị pc
N'ịbụ onye kasị ewu ewu ọrụ na udi nke Music, na Spotify-achọ nnukwu echichi nọmba n'ụwa nile. Na Spotify dị na free na adịchaghị version, e nwere ụfọdụ isi iche n'etiti ha abụọ.
Na Spotify Free, e nwere ụfọdụ na-agaghị emeli na-abịa. Emeli n'ụdị nke mgbasa ozi na-akakan mgbe ọ na-abịa Spotify free version. Na Free version nke Spotify, na-aga n'ihu nkwụsị ma ọ bụrụ na n'ụdị mgbasa ozi, nke na-na na-apụta dị ka mgbasa ozi na TV bụ otu n'ime ihe ndị kasị akụda mmụọ ihe na-amị maka na-ege ntị ka music. Na free version nke Spotify, ọdịyo àgwà nke 160 kbps maka desktọọpụ abịa, nke nwere ike na-ahuta ka ọkọlọtọ àgwà ụda.
Spotify adịchaghị pc
Mgbe anyị na-ekwu banyere Spotify adịchaghị pc, zuru ezu atụmatụ nke Spotify nwere ike mfe availed. Na Spotify adịchaghị na akaụntụ maka PC, ndị kasị elu audio àgwà nke 320 kbps nwere ike mfe availed site ọrụ na-akụda mmụọ mgbasa ozi na-anọkwasị kemgbe apụ. Nke a mwepụ nke mgbasa ozi na-enye ohere ka ndị ọrụ na-ege ntị music enweghị ihe ọ bụla nkwụsị. Ọzọ uru metụtara na Spotify adịchaghị PC bụ owuwu nyere ka ọrụ na-ege ntị music offline. Otú ọ dị, Spotify adịchaghị enye ọtụtụ ndị ọzọ uru n'ụdị ikwe na-ege ntị na-ege ntị music si n'ebe ọ bụla nke ụwa na na kwa offline mode. Na ojiji nke ọ bụla Spotify interface, na ihe owuwu nwere ike availed. I nwekwara ike ịhụ ma na-anụ listi ọkpụkpọ, òkè music na listi ọkpụkpọ, achọpụta ọhụrụ music, ịmepụta na dezie ndepụta ọkpụkpọ, na-ege ntị-awụ ọsọ n'ugwu ẹmende site Spotify Radio atụmatụ na Desktọpụ adịchaghị version nke Spotify.
Nbudata Spotify on PC dị ka nbudata ọ bụla ọzọ ngwa na desktọọpụ. The nbudata nwere ike mere si ukara website nke Spotify. Otú ọ dị, elu nchekwa eweta a chọrọ maka nzube nke nbudata nke Spotify, nke na-achọ ndị cache nke dịkarịa ala 5 GB na n'ihi mma arụmọrụ, ọ dịkarịa ala 50 GB nke diski ike.
Nzọụkwụ nbudata nwere ike soro dị ka n'okpuru:
Dị nnọọ ileta Spotify n'ụlọ peeji www.spotify.com
Pịa bọtịnụ o doro anya na banyere 'Sinụ Spotify'
Ka anya dị ka ị na-eme, ị ga-ibugharị a download page
The akpaka nbudata amalite na mgbe ọ ka okokụre nbudata, a nbanye igbe na-egosi na gị na ihuenyo.
Ị ga-ahụ otu nhọrọ na nbanye igbe na-ekwu bụghị a User? Debanye
Click on 'debanye' nhọrọ
Ozugbo ị pịa na nhọrọ e kwuru n'elu, a ọhụrụ window emepe, nke-enye gị edebanye iji a Facebook akaụntụ. Nke a ga-ekwe ka gị Facebook enyi ịhụ ihe ị na-ege ntị na Spotify
Ọ bụrụ na ị chọrọ aha na Facebook, jupụta na ozi gị na igbe nyere
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ 'ịmepụta otu akaụntụ eji gị e-mail adreesị', a ọhụrụ window ga-emeghe nke ga-ekwe ịdenye site email adreesị. N'ihi na nke a dị nnọọ tinye ozi nkeonwe gị na igbe nyere
Mgbe ahụ họrọ gị chọrọ ngwaahịa version ma free version ma ọ bụ adịchaghị version. E nwere ihe ọzọ version ikpe nke na-enye ohere iji atụmatụ nke adịchaghị maka mbụ 30 ụbọchị enweghị akwụ ụgwọ ọ bụla ego
Pịa oroma button na-ekwu download.
A Spotify icon ga-egosi na gị na desktọọpụ na ị ọma mere ihe na akaụntụ.
Ozugbo i dechara ma set nke ozi akaụntụ, pịa "Gaa n'ihu" button.
> Resource> Spotify> Olee otú iji Listen Spotify Music on Spotify PC